Working attitude of “hear”, “listen” and “ask” | Mycanvas
Working attitude of “hear”, “listen” and “ask”
အလုပ်ခွင်ရှိအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်သူတို့က သင့်ကိုစကားလာပြောတဲ့ အခြေအနေများကိုသင်အမြဲရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်မျိုးတွေမှာသင်ဘယ်လို တုန့်ပြန်တတ်ပါသလဲ? “hear”, “listen” and “ask”?? ဦးစွာအနေနဲ့ အဲ့ဒီ့ ၃ခုရဲ့ ကွဲပြားချက်ကို အတိအကျရှင်းပြနိုင်ပါသလား?
‘Hear’ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သင့်ရဲ့နားကအလိုအလျောက်ကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ‘Listen’ ဆိုတာကတော့ အခြားသူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို တက်ကြွစွာအာရုံစိုက်နားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ‘Ask’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးခြင်းကတော့ သင်မသိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာထိုကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသိပြီးဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ့ ‘Hear’, ‘Listen’, ‘Ask’ နည်းလမ်းများကိုသင်ခွဲခြားဖူးပါသလား?
ဒ့ါအပြင်သင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသင်သတိပြုဖူးပါသလား? တကယ်တော့ သူတို့ကိုအလုပ်ခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးမှာသင်ဂရုစိုက်မှုနည်းလေ၊ အခြားဝန်ထမ်းများအတွက်သင်ဟာစိတ်ချရမှုနည်းလေဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်တစ်ပါတ်က စပြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာ ‘Hear’, ‘Listen’ နဲ့ ‘Ask’ တို့ရဲ့ အခြေခံကျပြီး အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထားတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဖတ်ပြီးအားလုံးဖတ်ပြီးပါက သင်ရဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်အတွက် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။